App-ka salaadaha ee Muslim Pro oo lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo FBI-da. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub App-ka salaadaha ee Muslim Pro oo lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo FBI-da.
App-ka salaadaha ee Muslim Pro oo lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo FBI-da.
Previous articleSøreide: Waxaan la hadlay madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi.
Next articleGrønland-Oslo: Booliska oo hadana galay maqaaxi-shaax soomaaliyeed oo kale.